What is more important to you: the money or the work? ﻿
Tags: the most common interview questions what more important the money the work.
ဒီလိုမေးခွန်မျိုးက သဘာဝထက် လွန်ကဲတဲ့ အတွေးအခေါ် ရှိ၊ မရှိနဲ့ ငွေနောက်လိုက်သူလား။ ပညာလိုချင်သူလား ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား သိအောင် စမ်းသပ်တဲ့ မေးခွန်းပါ။
ဒါကြောင့် ဒီမေးခွန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေက ၂ ခုစလုံးအရေးကြီးတယ်လို့ ဖြေရင် သဘာဝကျပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သူအများစုက ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် ဝင်ငွေရအောင် အလုပ်လုပ် ကြရပါတယ်။ တစ်ဘက်တစ်လမ်းကလည်း ရပ်တည်ချက်ခိုင်မာလာအောင် လုပ်ငန်းခွင်ပညာ တွေကို ဆည်းပူးလေ့လာရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဝင်ငွေနဲ့ အလုပ် ၂ ခုစလုံးက အပြန်အလှန် ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကို သဘောပေါက်ရင် ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေက မခက်ခဲတော့ပါဘူး။